Thola indawo yokudlela enamakhasi aphuzi | Ukuhamba kwe-Absolut
I-Yellow Pages iyaqhubeka nokuba yisethenjwa sombuso sokufuna izihambi kanye nochwepheshe banoma yiluphi uhlobo, kusuka kodokotela bamazinyo kuya kubapayipi, ezindaweni ezinkulu ezisenhlonhlweni. Futhi ukuthi isidingo sokuthola indawo yokudlela elingana nesikhathi ngasinye sikuphoqa ukuthi uye kumaYellow Pages, ngoba iqoqa izindawo zokudlela ezihamba phambili eSpain futhi inika ithuba lokubhuka endaweni yesikhulumi uqobo.
Ngokuya ngesenzakalo, kungenzeka ukuthi ufuna i- yokudlela enemenyu yansuku zonke noma isikhungo esinencwadi evulekile, konke kuyahluka ngokuya ngenkampani nangosuku lwesonto. Nawa amanye amathiphu wokuthi ungasesha kanjani nokuthi iziphi izindawo zokudlela ongazibekela umcimbi ngamunye.
1 Indawo yokudlela yokuvala isidlo sasemini sebhizinisi
2 Indawo yokudlela yokudla nomndeni noma nabangane
Indawo yokudlela yokuvala isidlo sasemini sebhizinisi
Amasemini ebhizinisi angaba ngesimo esihluke kakhulu, ekubeni nengxenye yokuthengiselana lapho iqembu labantu lifuna ukuvala isivumelwano, ukuya emhlanganweni phakathi kozakwabo abasebenza enkampanini eyodwa. Inhloso yalo mhlangano njalo ukudala umoya okhululekile futhi okhululekile phakathi kwama-diners, ukuze inhlonipho edingekayo yenziwe ukuthi ikhulume ngqo nangokucacile.
Ngalo mqondo, kunezindlela ezimbili ezihlukile zokusondela ekuqokweni. Uma kungumhlangano wokuthengiselana, kungcono ukuya endaweni yokudlela incwadi evulekile lapho omunye umuntu enikezwa ithuba lokukhetha ipuleti lakhe. Ngale ndlela, ngeke uzizwe uphoqelekile ukwenza izinqumo ngokuxhamazela, into ezosebenza enkundleni yebhizinisi uma unikezwa inkululeko efanayo. Ngakolunye uhlangothi, uma kungukudla phakathi kweqembu lomsebenzi noma phakathi kozakwethu asebevele basebenze ndawonye, ​​indawo yokudlela enemenyu yansuku zonke iyindlela enhle. Ngemenyu evulekile, wonke amaqembu anganeliseka nganoma yiziphi izinketho ezitholakalayo, kanye nokulungisa intengo kuzo zonke izinhlobo zamaphakethe.
Ku Isiqondisi se-Yellow Pages ungathola izindawo zokudlela zazo zonke izinhlobo, zombili ngemenyu yosuku nangaphandle kwayo, futhi ngangokunokwenzeka incwadi yokudlela njengenketho ngaphakathi kwepulatifomu. Uhlelo ngokwalo lusiza ukuhlukanisa phakathi kwalezo zikhungo lapho kuzodingeka ukuthi zigcinwe khona ngenxa yomthamo.
Indawo yokudlela yokudla nomndeni noma nabangane
Uma umcimbi wesidlo kude nasekhaya uqukethe umgubho womndeni noma emhlanganweni phakathi kwabangani, kungenzeka ukuthi ukuqokwa kwenzeke ngempelasonto. Kulokhu, kukhona izindawo zokudlela ezishintsha imenyu ngesikhathi sangoLwesihlanu, ngeMigqibelo nangamaholide, kanye nokunye okungenzeka kungabi nenketho yemenyu yosuku. Kumkhombandlela we-Yellow Pages lolu lwazi lubonakala lukwazi ukubona phakathi kwawo wonke amathuba.
Kunoma ikuphi, uma kukhulunywa ngokugujwa komndeni, okuhle ukuya endaweni yokudlela enhle enemenyu, lapho unganikeza khona inketho ongayikhetha. Yize lokhu futhi kuncike kwinani labadli.
Noma ngabe yisiphi isikhathi, inkampani nosuku okufanele uye ngalo endaweni yokudlela, enkombeni ye-Yellow Pages online kungenzeka uthole indawo yokudlela yokwenza zonke izinhlobo zokudla.
Izindawo zokudlela nemigoqo
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » Thola indawo yokudlela enamakhasi aphuzi
AmaBalkan: Yini ongayibona kwenye yezindawo ezingaziwa kakhulu emhlabeni